Induction Heating Bearings Muchina we shrink yakakodzera Mhando dzakasiyana dzekutakura.
Induction Heating fani muchina PDF
Iko kuvandudza kwemikana yemishini kunoenderana nekugadzirwa kwema fani anogona kushanda pakumhanya kwakakomba kumhanya. Mhando yemazuva ano yekutakura iyo inoshandiswa muindasitiri yemuchina ndeyekupisa kupisa. Izvi zvine zvakawanda zvakanakira. Kusvitswa kupisa fani haudi chinhu chinozora. Iko hakuna zvemakanika kusangana pakati pekushanda zvikamu zvebereko. Iyo inoshanda chinyararire nekushomeka kudiki. Hupenyu hwekubereka uku hwakareba kupfuura hwakajairika.
Nzira dzekuongorora dzekuongororwa kwezvematambudziko ehutano hwekushomeka mune zvemukati fani hazvina kunaka.
Kune iyo modhi yakaratidzwa, isu tinoshandisa iyo inogumira element nzira kuita kuverenga. Iko kupisa kweanopinza mabheyari kunofanira kuongororwa zvakaringana, apo mukaha uripakati pezvikamu zvinoshanda uri mudiki nekuti tembiricha inowedzera inogona kukonzera kubata kubata ……
induction kupisa fani
Categories Kupinza Kupisa PDF Tags yakakura frequency fani, yakakwirira frequency kudziya fani, induction kubereka, induction bearing heater, induction yakatakura heater pdf, induction inotakura pdf, induction kupisa kutakura, induction kupisa fani pdf, kudzimisirwa kupisa kunodzora fani yakakodzera Post navigation
Induction Kupisa nheyo PDF